Mampijanona ny asa rehetra ny Cabo Verde Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mampijanona ny asa rehetra ny Cabo Verde Airlines
Ny toe-javatra tsy mbola nisy toa azy dia nateraky ny fihanaky ny Coronavirus (COVID-19, dia miteraka loza mitatao amin'ny indostrian'ny fiaramanidina, sy ny fizahan-tany, fa amin'ny ankapobeny ny toekarena sy ny fifandraisana ara-tsosialy.
Vokatry ny fielezana mararin'ny areti-mandringana Coronavirus Covid-19 tany amin'ny firenena maherin'ny 150, firenena maro no efa nametraka fandrarana ny dia tsy maharitra mitaky fitakiana fiaramanidina hampiato ny asany.
Noho izany, Seranam-piaramanidina Cabo Verde mampahafantatra ny mpanjifany fa manoloana an'io toe-javatra io, ary rehefa jerena ny hetsika nataon'ny Governemanta Cabo Verde hanakatona ny sisin-tanin'ny firenena, ny Cabo Verde Airlines dia hampiato ny asany fitaterana rehetra manomboka ny 18-03-2020 ary mandritra ny fotoana iray farafaharatsiny 30 andro.
Ny governemanta Cabo Verde dia nandrara ny sidina nankany Italia tamin'ny faran'ny volana febroary lasa teo, nitarika ny orinasa hampiato ny sidina mankany Roma sy Milan. Nanapa-kevitra ny governemanta, tamin'ny martsa 18, mba handràra ny fifandraisana an-habakabaka rehetra amin'i Portugal sy ny firenena eropeana rehetra misy tranga Covid-19, ary koa ho an'ny Etazonia, Amerika, Brezila, Senegaly ary Nizeria.
Vao tsy ela akory izay, ny Cabo Verde Airlines dia efa nampiato ny sidina mankany Washington, DC (USA), Porto Alegre (Brezila) ary Lagos (Nizeria), ankehitriny dia manafoana ny zotra mankany Boston (USA), Lisbon (Portugal), Paris (France), Dakar ( Senegal), Fortaleza ary Recife (Brezila).
Cabo Verde Airlines dia manoratra fangatahana fampahalalana marobe avy amin'ny mpanjifany ary manome antoka fa manao ny zavatra rehetra izy mba hamaliana ny mpandeha rehetra.
Manenina ny Cabo Verde Airlines noho ny fanelingelenana naterak'ireo mpandeha rehetra ary maniry ny hanome toky ny mpandeha sy ny mpiasa rehetra fa ny fiarovana sy ny fiarovana ny mpandray anjara rehetra no hijanona ho laharam-pahamehana indrindra amin'ny orinasa.
Ny orinasa dia manohy miresaka amin'ny tompon'andraikitra lehibe sy ny tompon'andraikitra eo an-toerana mba hanombanana raha misy sidina manokana, asa maha-olona, ​​fampodiana an-tanindrazana na entana, mila tazonina mba hahazoana antoka fa tsy hitokana ny nosy sy ireo entana ilaina, toy ny fanafody azo omena.
Ny COVID-19 dia manapaka ny fahafahan'ny fivezivezena an'habakabaka 80 isan-jato
Fanambaran'ny governemanta Indonezia: Tsy misy visa intsony rehefa tonga noho ny COVID-19